တစ်ကောလိပ်ခရီးစဉ်များ၏အများစုမှာပြုလုပ်ခြင်း 8 သိကောင်းစရာများ
တစ်အောင်မြင်သောကောလိပ်ခရီးစဉ်များအတွက် 8 သိကောင်းစရာများ
တကယ်တစ်ဦးကျောင်းကိုသိရန်, ကျောင်းပရဝုဏ်ခရီးစဉ်ကို ယူ. ထက်ပိုလုပ်ပါ
ကောလိပ်လာရောက်လည်ပတ်သူအရေးကြီးလှသည်။ တဦးတည်း, သူတို့ကကူညီ မယ့်ကျောင်းကို၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားကိုသရုပ်ပြ ။ သင်တစ်ဦးသည်ကျောင်းရန်သင့်အသက်တာ၏နှစ်နှင့်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကျူးလွန်ရှေ့မှာလည်း, သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများအတွက်ကောင်းသောပွဲစဉ်သောအရပ်ဌာနရွေးချယ်ရာတွင်နေသေချာဖြစ်သင့်သည်။ သင်သည်မည်သည့်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကနေကျောင်းကို၏ "ခံစား" get, ဒါကြောင့်ကျောင်းဝင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သေချာမဖွစျနိုငျသညျ။ အောက်တွင်သင့်ကောလိပ်အလည်အပတ်ခရီးထဲကအများဆုံးရတဲ့အဘို့အနည်းငယ်ကိုအကြံပေးချက်များဖြစ်ကြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျတရားဝင်ကျောင်းဝင်းခရီးစဉ်ယူပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်န်းကျင်ပြီးမှဖို့အချိန်ကိုခွင့်ပြုရန်သေချာစေပါသင့်တယ်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်သင်ကြားခရီးစဉ်လမ်းညွှန်သင်တစ်ဦးသည်ကျောင်းရဲ့အရောင်းရဆုံးမှတ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ရှေးအကျဆုံးနှင့်အလှဆုံးအဆောက်အဦးများသင်တစ်ဦးကောလိပ်၏တစ်ခုလုံးကိုပုံတစ်ပုံပေး, မဧည့်သည်များအတွက် manicured ခဲ့တအိပ်ဆောင်ကအခန်းမပါဘူး။ အပိုမိုင်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကျောင်းဝင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာရဖို့ကြိုးစားပါ။
ကောလိပ်သတင်းလွှာဘုတ်အဖွဲ့။ ရှင်ပေါလု goyette / Flickr ကို
သငျသညျကျောင်းသားစင်တာ, ပညာရေးအဆောက်အဦများနှင့်နေအိမ်သို့ခန်းမသို့သွားရောက်သောအခါ, စာစောင်ပျဉ်ပြားကိုဖတ်ရှုဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ယူပါ။ သူတို့ကကျောင်းဝင်းအပေါ်ဖြစ်ပျက်ရဲ့အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေး။ ပို့ချချက်, ကလပ်ရွတ်ဆိုခြင်းနှင့်ပြဇာတ်များအတွက်ကြော်ငြာတွေကိုသင်စာသင်ခန်း၏ပြင်ပတွင်သွားလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးအစားများတစ်ဥာဏ်ကောင်းသောပေးနိုင်ပါသည်။
ကောလိပ်လေးအတွက်အသင့်တော်ခန်းမ။ redjar / Flickr ကို
သင်ကထမင်းစားခန်းခန်းမအတွင်းအစာစားခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းသားအသက်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးခံစားရနိုင်။ သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူထိုင်ဖို့, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူနေလျှင်ပင်, သင်ပတ်လည်စည်ကားလှုပ်ရှားမှုစောငျ့ရှောကျနိုငျပါကြိုးစားပါ။ ကျောင်းသားများပျော်ရွှင်ပုံပေါ်သလား? အလေးပေး? သုန်မှုန်? အစားအစာကောငျးသလဲ လုံလောက်သောကျန်းမာရွေးချယ်စရာရှိပါသလား အတော်များများဝင်ခွင့်များရုံးထမင်းစားခန်းခန်းမထဲမှာအလားအလာကျောင်းသားများကိုအခမဲ့အစားအစာများအဘို့အကူပွန်ကိုငါပေးမည်။
သင့်ဗိုလ်မှူးတစ်ဦး Class ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ကောလိပ်စာသင်ခန်း။ Cyprien / Flickr ကို
သင်လေ့လာချင်ဆိုတာသိပါလျှင်တစ်ဦးလူတန်းစားအလည်အပတ်ခရီးအသိတွေအများကြီးစေသည်။ သင်သည်သင်၏လယ်ပြင်၌အခြားကျောင်းသားများစောင့်သူတို့စာသင်ခန်းဆွေးနွေးမှုအတွက်ဘယ်လောက်ဆောင်ရွက်နေတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အလူတန်းစားပြီးနောက်နေဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ပါမောက္ခနှင့်အဓိကသူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရဖို့ကျောင်းသားများနှင့်အတူ chat ဖို့ကြိုးစားပါ။ ကောလိပ်များဧည့်သည်များကြေညာလူတန်းစားတွင် drop ဖို့ခွင့်မပြုပါဘူးတဲ့စာသင်ခန်းအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်-အချိန်စာရင်းကိုကြိုတင်ဖုန်းဆက်ဖို့သေချာပါစေ။
ကောလိပ်ပါမောက္ခ။ သူ Cate Gillon / Getty Images
သင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှအဓိကအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်ဆိုပါက, ထိုလယ်ပြင်၌တစ်ဦးပါမောက္ခနှင့်အတူကွန်ဖရစီစဉ်ပါ။ ဤသည်ကိုသင်ဒြေရဲ့အကျိုးစီးပွားသင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုက်ညီလျှင်ကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အဓိကရဲ့ကျောင်းဆင်းပွဲလိုအပ်ချက်များကို, ဘွဲ့ကြိုသုတေသနအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတန်းအစားအရွယ်အစားအကြောင်းကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ကောလိပ်ကျောင်းသားများ။ berbercarpet / Flickr ကို
သင့်ရဲ့ ကျောင်းဝင်းဧည့်လမ်းညွှန် ကျောင်းစျေးကွက်မှလေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။ သငျသညျ woo မှပေးဆောင်တဲ့ကြသည်မဟုတ်သူကျောင်းသားများကဆင်းလိုက်ရှာဖို့ကြိုးစားပါ။ ဤရွေ့ကားလက်တန်းပြောဆိုမှုများမကြာခဏဝင်ခွင့်များဇာတ်ညွှန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကောလိပ်ဘဝအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်တကွသင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ်တက္ကသိုလ်တာဝန်ရှိသူများက၎င်းတို့၏ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးတနင်္ဂနွေအရက်သောက်သို့မဟုတ်လေ့လာနေဖြုန်းလျှင်သင်ပြောပြပေမယ့်ကျောင်းသားများကိုတန်ခိုး၏အုပ်စုတစုပါလိမ့်မယ်။
ကောလိပ်ကုတင်။ unincorporated / Flickr ကို
ဒါကြောင့်မှာအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှင်လျှင်, ကောလိပ်မှာတညဉ့်ကိုလွန်စေ။ အများစုမှာကျောင်းများတွင်နေ့ချင်းညချင်းလညျပတျအားပေးသဖြင့်အလျှင်းသင်တစ်ဦးနေထိုင်ရာခန်းမထဲမှာညဥ့်ထက်ကျောင်းသားဘဝတစ်ပိုကောင်းအသိကိုငါပေးမည်။ သင့်ရဲ့ကျောင်းသားအိမ်ရှင်အချက်အလက်များ၏ဥစ္စာဓနပေးနိုငျ, သင်စင်္ကြံပေါ်တွင်များစွာသောအခြားကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ chat ဖွယ်ရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းကျောင်းရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ရလိမ့်မယ်။ အတိအကျ 1:30 pm မှာလုပ်နေတာကျောင်းသားများအများစုဘာတွေလဲ?
8 တစ်ခုညတွင်းချင်းခရီးစဉ်သလားဖို့အကြောင်းရင်း (နှင့်အဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်ရန်)
သငျသညျအများအပြားကျောင်းများနှိုင်းယှဉ်ဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့လည်ပတ်မှုမှတ်တမ်းတင်ရန်သေချာစေပါ။ အသေးစိတ်ခရီးစဉ်၏ထိုအချိန်ကကွဲပြားပုံရပေမည်, သို့သော်တတိယသို့မဟုတ်စတုတ္ထခရီးစဉ်အသုံးပြုပုံကျောင်းများသငျ့စိတျထဲမှာအတူတူမှုန်ဝါးစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ရုံအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများချရေးမထားပါနဲ့။ ခရီးစဉ်-သင်အိမ်ပြန်ကဲ့သို့ခံစားရကြောင်းကျောင်းမှာတက်အဆုံးသတ်ချင်နေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
အဆိုပါ Fenway Consortium ၏ကောလိပ်များ
ဝိန်း Fort Hays ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
အဆိုပါ Pronoun ငါနှင့်ငါ့အကြားခြားနားချက်
မြေပုံပေါ်တွင် Microsoft ချပြီး
ကာယဗလလေ့ကျင့် symmetry, အပိုင်း II ကို၏အခြေခံ
Ik Onkar (တစျခုသညျဘုရားသခငျ) ၏အဓိပ္ပာယ်နားလည်ခြင်း
ကုံမွန်း - မွန်းလက္ခဏာများ
တစ်ဝါကျ Adverb ဆိုတာဘာလဲ
သင့်ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက် print ထုတ်လို့ရတဲ့အစာစား
ဆေးထိုးအပ် Cast ကိုပင်ရောဂါ - ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း
": နက်ရှိုင်းသောအာကာသကိုး Star Trek" ၏ 10 အကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲများ
Electromotive Force အဓိပ္ပာယ်
BB-8 နှင့်အတူစွဲလမ်း! တစ်ဦးကကစားစရာမှလမ်းညွှန်နှင့်အခြား BB-8 Merchandise
Philly Soul ကဘာလဲ?
ဆိုသံ Registered ဘာတွေလဲ?
အဘယ်အရာကိုသွန်သင် Grammar အတွက်အလုပ်လုပ်
2006 နှင့် 2007 ၏ထိပ်တန်းရိုးရာသီချင်းများ